Amanqaku kaSerban Enache Martech Zone |
Amanqaku ngu Iserban Enache
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kuyilo nakwimithombo yeendaba emitsha, uSerban uzibonakalisile njengomphathi onesakhono, odibanisa ngempumelelo ubuchule bokuyila kunye nolawulo. Wasebenzisana no-Archiweb ngo-1998, inkokeli ephumelele amabhaso phakathi kweenkampani zokuyila iiwebhu e-SE Yurophu, kwaye wayecinga ukuba i-arhente yesitokhwe eyayiza kubakho kamva ekuqaleni kuka-2000. okanye ukuphucula ubukho babo kwi-Intanethi. USerban ujongana nesicwangciso sophuhliso loshishino lwe Dreamstime, kwaye ibandakanyeka ngokunzulu kwimisebenzi yemihla ngemihla yoluntu lwewebhusayithi. Ungumbono onobuchule okholelwa ekuphazamiseni imigaqo-nkqubo yeshishini lokujonga ukhetho olutsha. Uqale i-Dreamstime ngekhamera ephelelwe lixesha, ephelelwe lixesha kunye nengqokelela yakhe yeefoto. Walandela iphupha lakhe kwaye ngoku i-Dreamstime, ngaphandle kokuba yiarhente kunye neshishini, yeyona ndawo inkulu yokuhlanganisana yabathwebuli bezithombe abanomdla kunye nabayili.